K-Pop ပရိသတ်​တွေဟာ သူတို့ နှစ်သက်ပြီး အား​ပေးတဲ့ Idol ​တွေအတွက် fansign နဲ့ ​လေဆိပ်လို​နေရာ​တွေမှာ လက်​ဆောင်​တွေ​​ပေးတတ်ကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ​မွေး​နေ့​တွေ၊ အဖွဲ့ရဲ့ နှစ်ပတ်လည်​​​နေ့​တွေလို ​နေ့ထူး​နေ့မြတ်​တွေမှာလည်း တန်ဖိုးကြီး လက်​ဆောင်​​တွေကို ​ပေးပို့တတ်ကြပါ​သေးတယ်။
တချို့​သော အစွန်း​ရောက် fan ​တွေနဲ့ anti fan ​တွေက​​တော့ ဒါကို အခွင့်​ကောင်းယူပြီး အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ပစ္စည်း​တွေ၊ ခြိမ်း​ခြောက်စာ​တွေ ပို့တတ်ကြတဲ့အတွက် တချို့ Idol ​တွေအတွက်​တော့ လက်​ဆောင်ရတာဟာ သိပ်ပြီး ​ပျော်စရာ​တော့ မ​ကောင်းလှပါဘူး။
ဒါ​ကြောင့် တချို့ Idol ​တွေဟာ သူတို့ရဲ့ လုံခြုံ​ရေးအတွက် ပရိသတ်​​တွေရဲ့ လက်​ဆောင်​​တွေကို လက်မခံကြသလို တချို့က​တော့ လက်​ဆောင်​တွေအစား ပရိသတ်​တွေရဲ့ ချစ်ခြင်း​မေတ္တာနဲ့ အား​ပေးမှုကိုသာ လိုချင်ကြပြီး လက်​ဆောင်ဝယ်​ပေးမယ့် ပိုက်ဆံ​တွေကို တကယ်လိုအပ်​​နေတဲ့​နေရာ​တွေဆီ ​​ရောက်​စေချင်တဲ့ စိတ်ရှိကြပါတယ်။ ဒါ​ကြောင့် ယခုတစ်ခါမှာ​တော့ အ​ကြောင်းအမျိုးမျိုး​ကြောင့် ပရိသတ်​တွေဆီက လက်​ဆောင်ကို လက်မခံ​တော့တဲ့ K-Pop Idol ​တွေကို ​ဖော်ပြ​ပေးချင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ idol ​တွေက​တော့…
BLACKPINK အဖွဲ့က​တော့ ယခုနှစ်အထိ ပရိသတ်​တွေရဲ့ လက်​ဆောင်​တွေကို လက်ခံခဲ့ပါ​သေးတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ​အောက်တိုဘာလ ၁၂ ရက်​နေ့ကမှ YG Entertainment က BLACKPINK အဖွဲ့အတွက် ပရိသတ်​တွေရဲ့ လက်​ဆောင်​​တွေကို လက်ခံ​တော့မှာမဟုတ်ပဲ လက်​ရေးစာ​တွေကိုသာ လက်ခံမှာဖြစ်​ကြောင်း ​ကြေငြာခဲ့တာပါ။ ဒီကိစ္စကို အဖွဲ့ဝင်​တွေကိုယ်တိုင်က ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်သလို သူတို့ကို လက်​ဆောင်​တွေ​ပေးမယ့်အစား ပရဟိတလိုမျိုး ​ကောင်းတဲ့​နေရာ​တွေမှာ အသုံးပြုဖို့ အဖွဲ့ဝင်​တွေက ဆန္ဒရှိ​တာ​ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
IU က​​တော့ ပရိသတ်​တွေရဲ့ လက်​ဆောင်ကို အမြဲတမ်း ငြင်းဆို​​လေ့ရှိသလို သူမကို လက်​ဆောင်ဝယ်​မ​ပေးဖို့ တည့်တိုး​ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ အ​ကြောင်းအရင်းက​တော့ သူမဟာ အခု မတရားချမ်းသာ​နေပြီမို့ လက်​ဆောင်​တွေကို လက်ခံစရာမလို​​တော့တာ​ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ​ဖြေခဲ့ဖူးပါတယ်။ သူမကိုယ် သူမ လက်​ဆောင်​ပေးရတဲ့ ​ပျော်ရွှင်မှုကို ပရိသတ်​တွေအ​နေနဲ့ လုယူမသွားသင့်ဘူးလို့​တောင် ​နောက်​ပြောင်ခဲ့ဖူးပါ​သေးတယ်။
G-Dragon က​တော့ ပရိသတ်​တွေဆီက လက်​ဆောင်​တွေကို လက်ခံ​​တော့မှာ မဟုတ်​ကြောင်းကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်တုန်းက လက်​ရေးစာတစ်​စောင်နဲ့ ပရိသတ်​တွေကို အသိ​ပေးခဲ့တာပါ။ GD က​တော့ ပရိသတ်​တွေ သူ့​ဘေးမှာရှိ​နေတာနဲ့တင် ပြည့်စုံ​နေပြီမို့ပါတဲ့။ လက်​ဆောင်​တွေ လက်ခံတာထက် ပရိသတ်​တွေနဲ့အတူ အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့အချိန်​တွေ၊ အမှတ်တရ​တွေကို ပိုပြီး ဖန်တီးချင်တယ်လို့ သူ့ရဲ့ စာထဲမှာ ​ရေးသားထားပါတယ်။
4. Super Junior အဖွဲ့ဝင် Heechul
Heechul က​တော့ ပရိသတ်​တွေဆီက လက်​ဆောင်ကို ယူဖို့ သူ့မှာ လက် ၂ ဖက်ပဲရှိတာ​ကြောင့် ပရိသတ်​တွေရဲ့ လက်​ဆောင်ကို လက်မခံဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ တစ်ခါက ​ပြောပြဖူးပါတယ်။ သူ့အ​နေနဲ့ ပရိသတ်တစ်ချို့ဆီက လက်​ဆောင်ယူပြီး တခြားလူ​တွေဆီက မယူဘူးဆိုရင် အဲ့ဒီလူ​တွေက စိတ်မ​​ကောင်းဖြစ်မှာမို့ လုံးဝမယူ​တော့ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။
ဒါ့အပြင် ပရိသတ်​တွေက နာမည်ကြီး brand ​တွေရဲ့ ပစ္စည်း​တွေကို လက်​ဆောင်​ပေး​လေ့ရှိတာ​ကြောင့် Heechul က “ကျွန်​တော်က branded အဝတ်အစား​​တွေ မဝတ်လည်း ​တောက်ပတဲ့ လူတစ်​ယောက်ပါ။ ဒါ​ကြောင့် အဲ့ဒါ​တွေ​ပေးဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး” လို့ fansign တစ်ခုမှာ​ ပြောခဲ့ပါ​သေးတယ်။
5. SHINee အဖွဲ့ဝင် Taemin
၂၀၁၃ ခုနှစ်တုန်းက Taemin ဟာ သူ့ရဲ့ website မှာ စာတစ်ခုတင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့စာထဲမှာ သူဟာ ပရိသတ်​တွေဆီက လက်​ဆောင်​တွေကို မကြာခဏ လက်ခံရရှိခဲ့ပြီး အဲ့အတွက် ​ကျေးဇူးတင်​ကြောင်း​ပြောကြားခဲ့ပြီး ​လက်​ဆောင်​တွေကို ​နောက်ထပ် လက်ခံ​တော့မှာ မဟုတ်ပဲ ဒီချစ်ခြင်း​မေတ္တာကို သူ့အစား လိုအပ်​နေတဲ့သူ​တွေကို မျှ​ဝေ​​ပေးဖို့ ​မေတ္တာရပ်ခံခဲ့ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ဒီလက်​ဆောင်​တွေက သူ့အတွက် ပိုအဓိပ္ပါယ်ရှိမှာဖြစ်တယ်လို့လည်း Taemin က ဆိုပါတယ်။ ဒါ​ကြောင့် ပရိသတ်​တွေအ​နေနဲ့ နားလည်​ပေးကြဖို့ ​​ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
6. VIXX အဖွဲ့ဝင် N
N က​တော့ ယခင်က fansign တစ်ခုမှာ “ကျွန်​တော်တို့ကို လက်​ဆောင်​ပေးဖို့ fansign လာတာမဟုတ်ပဲ ကျွန်​တော်တို့ကို ကြည့်ဖို့ လာတာဆိုရင် ပို​ကောင်းမယ်” လို့ ပရိသတ်​တွေကို ​ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ ​နောက်ပိုင်းမှာ​​တော့ ပရိသတ်​တွေဆီက လက်​ဆောင်​တွေကို လက်ခံ​တော့မှာ မဟုတ်​ကြောင်း လူသိရှင်ကြား ​အသိ​ပေးခဲ့ပါတယ်။
BTS အဖွဲ့က​​​တော့ သူတို့ကို ​စျေးကြီးတဲ့ လက်​ဆောင်​တွေ မ​ပေးဖို့ ​ပရိသတ်​တွေကို ​ပြော​ပေမဲ့ ARMY ​တွေက စကားနားမ​ထောင်ကြပါဘူး။ ဒါ​ကြောင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ လက်​ဆောင်​တွေအစား လက်​ရေးစာ​တွေကိုပဲ လက်ခံ​တော့မယ်လို့ BTS အဖွဲ့ရဲ့ fan cafe မှာ တရားဝင်​ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ပရိသတ်​တွေက သူတို့ကို ချစ်တဲ့စိတ်ကို ပိုက်ဆံသုံးပြီး ​ဖော်ပြတာထက် စကားလုံးအ​နေနဲ့ ​ပြောင်းလဲ​ဖော်ပြဖို့ ​မျှော်လင့်တယ်လို့လည်း ​​​ပြောခဲ့ပါတယ်။
8. EXO အဖွဲ့ဝင် Chen, D.O. နဲ့ Xiumin
Chen က​တော့ D.O, Xiumin တို့နဲ့အတူ EXO-L ​တွေရဲ့ လက်​​ဆောင်ကို လက်မခံ​​တော့ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်း famcafe ကတစ်ဆင့် အသိ​ပေးခဲ့ပါတယ်။ Xiumin က​တော့ ချစ်ခြင်း​မေတ္တာနဲ့ ဂရုစိုက်မှုက လက်​ဆောင်​တွေထက် အချိန်အကြာကြီး ခံတာ​ကြောင့် ပရိသတ်​တွေရဲ့ ချစ်ခြင်း​မေတ္တာနဲ့ ဂရုစိုက်မှုကိုပဲ လက်ခံမယ်လို့ ​​ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
9. JYP အနုပညာရှင်များ
TWICE, ITZY, Stray Kids, Day6 တို့အပြင် အခြား​သော JYP Entertainment လက်​အောက်က အနုပညာရှင်အားလုံးဟာ ပရိသတ်​တွေရဲ့ လက်​ဆောင်ကို လက်မခံကြပါဘူး။ သူတို့ဟာ အဖွဲ့ရဲ့ ပွဲဦးထွက် နှစ်ပတ်လည် banner ​တွေ၊ လက်​ရေးစာ​တွေနဲ့ အလှူဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်း​တွေကိုသာ လက်ခံပါတယ်။ သူတို့​တွေဟာ တန်ဖိုးကြီးတဲ့ လက်​ဆောင်​တွေကို မလိုအပ်ပဲ ပရိသတ်​တွေဆီက အား​ပေးမှုကိုသာ လိုအပ်တယ်လို့ ခံယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။
10. NU’EST နဲ့ SEVENTEEN
PLEDIS Entertainment လက်​အောက်က ​ယောကျ်ား​လေးအဖွဲ့ ၂ ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ NU’EST နဲ့ SEVENTEEN အတွက် လက်​ဆောင်​တွေကို​တော့ ၂၀၂၀ ခုနှစ်က စပြီး လက်ခံ​တော့မှာ မဟုတ်​ကြောင်း PLEDIS Entertainment က ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမှာ ​ထုတ်ပြန်​ကြေငြာခဲ့တာပါ။ ပရိသတ်​တွေရဲ့ ချစ်ခြင်း​မေတ္တာနဲ့ အား​ပေးမှုအတွက် ​ကျေးဇူးတင်​ပေမဲ့ တန်ဖိုးကြီးလက်​ဆောင်​တွေအစား လက်​ရေးစာကိုပဲ လက်ခံ​​​​တော့မှာဖြစ်တယ်လို့ PLEDIS က ​ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Next 'My Universe' Remix အတွက် အကောင်းဆုံးအားထုတ်ခဲ့သူ SUGA အား ချီးကျူးပြောဆိုခြင်း »
Previous « ၇ လတည်းနဲ့ အမြင့်ဆုံးစံချိန်တင် တစ်ဦးတည်းသောထိပ်တန်းမင်းသားဖြစ်လာသူ Xiao Zhan